अमेरिकी वैज्ञानिकको खुलासा, ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले कोराेनाको चेतावनी दिएन - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
भारत र पाकिस्तानका मलेरिया विरोधी औषधीले काेराेना निकाे हुँदैन
वाशिंगटन । कोरोना भाइरस महामारीकाे सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनले बर्खास्त गरिएको अमेरिकी वैज्ञानिकले भारत र पाकिस्तानका मलेरिया विरोधी औषधीले काेराेना निकाे नहुने चेतावनी दिएका छन ।
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनका शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारीहरुलाई भारत र पाकिस्तानका मलेरिया विरोधी औषधी लगायत कोरोना भाइरस महामारीको बारेमा धेरै चोटि चेतावनी दिइएको उनीहरूले बताएका छन ।
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइनको कथित खराब क्वालिटी पनि रिपोर्ट गरिएको थियो। अमेरिकाको विशेष सल्लाहकार कार्यालय, हिसलब्लोवर्सको सुरक्षा कार्यालय, मंगलबार उजुरीमा डा. रिक ब्राइटले स्वास्थ्य र मानव सेवा विभागका शीर्ष अधिकारीहरू विशेष गरी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन र व्यक्तिगत सुरक्षा जस्ता औषधिहरूको आरोप लगाए।
जब ब्राइटलाई बर्खास्त गरियो, उनी बायोमेडिकल उन्नत अनुसन्धान र विकास एजेन्सी, स्वास्थ्य र मानव सेवा विभाग (HHS) विभागको साथ काम गर्ने एक अनुसन्धान एजेन्सीको नेतृत्व गरे। उजुरीमा भनिएको छ, “डा. उज्ज्वल पाकिस्तान र भारतबाट लागूपदार्थको आयातको बारेमा चिन्तित थियो किनकि एफडीएले औषधि वा यसको कारखानाको निरीक्षण गर्दैन।
यो आरोप गरिएको छ कि कारखानामा बनाइएका यी औषधिहरू जसमा अनुसन्धान गरिएको छैन, तिनीहरूलाई मिलावटी गर्न सकिन्छ र यो औषधि लिने व्यक्तिहरूको लागि खतरनाक हुन सक्छ। ट्रम्प प्रशासनले दशकौंसम्म औलोको उपचारको लागि प्रयोग गरिने औषधि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइनको करिब पाँच करोड ट्याब्लेटहरू आयात गरेको थियो, जुन मार्चमा अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा आपतकालिन प्रयोगको लागि स्वीकृत गरिएको थियो।